Jose Mourinho ‘Diyaar Uma Ahan Inuu Ka Hadlo’ Guuldarradii Tottenham Ee Arsenal – Muxuu Ku Sababeeyay? – Garsoore Sports
Jose Mourinho ‘Diyaar…
Jose Mourinho ayaa sheegay inuusan wali ‘diyaar u aheyn inuu ka hadlo’ kulankii Tottenham ay guuldarrada 2-1 ka soo gaartay Arsenal Axaddii.
Mourinho ayaa lagu dhaleeceeyay qaab cayaareedka dhowaanahan ee kooxda Tottenham, ka hor kulankooda muhimka ah ee wareegga 16ka Europa League ee ay la ciyaarayaan Dinamo Zagreb, wuxuuna sheegay inuusan diyaar u aheyn baaritaan dadweyne oo dheeri ah oo lagu sameeyo wixii qaldanaa axaddii balse qeyb ahaan wuxuu u sababeeyay natiijada rigooradii muranka dhalisay ee Gunners la siiyay.
“Diyaar uma ihi inaan kaala hadlo tan maxaa yeelay tani waxay ku saabsan tahay falanqaynta ciyaarta, falanqaynta waxqabadka, falanqaynta sababaha keenay waxqabad niyad jab leh. Maaha wax aan diyaar u ahay inaan kaala hadlo, gaar ahaan laba ama saddex maalmood kaddib iyadoo 24 saac kaddibna kulan kale oo muhiim ah oo aan haysanno, ”ayuu yiri.
Spurs ayaa haatan 2-0 ku hoggaamineysa kulankooda Europa League ee ay la leeyihiin Dinamo Zagreb, kuwaasoo yeelan doona tababare cusub oo ku soo biiraya lugta labaad ee ka qabsoomeysa garoonka kooxda Dinamo ee caasimada Croatia.
Zoran Mamic, oo mas’uul ka ahaa lugtii hore ee Tottenham Hotspur Stadium ka dhacay isbuucii hore, ayaa is casilay kaddib markii lagu xukumay ku dhowaad shan sano oo xabsi ah. Caawiyihiisa, Damir Krznar, ayaa loo magacaabay leylinta kooxda si ku meel gaar ah.